Home Wararka Gudaha R/W Xamse oo wadahadal la yeeshay Madaxweyne goboleedkii u horreeyey waa Madaxweyne...
R/W Xamse oo wadahadal la yeeshay Madaxweyne goboleedkii u horreeyey waa Madaxweyne Cali Guudlaawe
Muqdishu(Radiohalgan.com)– Ra’iisul wasaaraha magacaaban ee Soomaaliya, Mudane Xamze Cabdi Barre oo kulamo ka bilaabay magaalada Muqdisho ayaa maanta wadahadalkii ugu horreeyey la yeeshay Madaxweynaha dowlad goboleedka HirShabelle. Mudane Cali Guudlaawe Xuseen.
Kulanka Mudane Cali Guudlaawe iyo Xamze ayaa ujeedkiisu waxa uu ahaa mid salaan iyo isbarasho ah oo ka dhashay magacaabista ra’iisul wasaaraha cusub ee shalay uun la magacaabay.
Madaxweynaha Dowladda Hir-Shabeelle ayaa marka hore u hambalyeeyey ra’iisul wasaaraha magacaaban, wuxuuna Alle uga baryey inuu u fududeeyo mas’uuliyadda loo igmaday.
Sidoo kale waxa ay diiradda isla saareen wax yaalaha hor tabinta u ah waxqabadka xukuumadda cusub oo ay ka mid yihiin ugurmashada dadka ay abaarahu saameeyeen , amniga dalka iyo arrimaha dib uhishiisiinta.
Dhinaca kale ra’iisul wasaaraha cusub ayaa maanta booqasho ugu tegay guddoonka labada Aqal ee Baarlamaanka, wuxuuna ahaa kulankoodii u horreeyey oo ahaa mid is barasho ah.
Next articleMidowga Yurub oo qalab milatari ku wareejiyey Wasaaradda Gaashaandhigga XFS
Madaxweyne Xasan Sheekh oo kulan la qaatay Safiirada Soomaaliya u fadhiya...